SDX-TzPivots - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
စနေနေ့, ဇွန်လ 23, 2018
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ SDX-TzPivots
သြဂုတ် 11, 2016
If you want to modify the colors, please scroll down to line 200 and below (where it says “Calculate Levels”) and change the colors. Valid color names can be obtained by placing the cursor onacolor name (e.g. somewhere in the word “လိမ္မော်သီး” and pressing F1).
SDX-TzPivots isaMetatrader4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Copy SDX-TzPivots.mq4 to your Metatrader Directory / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
How to remove SDX-TzPivots.mq4 from your Metatrader4ဇယား?
Next ကိုဆောင်းပါးMA Triple Median